भारतको विकल्पमा चीनबाट लाभ लिन सकिँदैन– डा. बाबुराम भट्टराई « Khabarhub
भारतको विकल्पमा चीनबाट लाभ लिन सकिँदैन– डा. बाबुराम भट्टराई
काठमाडौं– पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले दुई तिहाइको सरकारले पेश गरेको बजेट सन्तुष्ट हुने खालको नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
शुक्रवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्री बजेट निर्माणमा अलमलिएको बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा. भट्टराईले समाजवादको नाममा बजेटलाई उत्पादनमुखी भन्दा वितरणमुखि बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।
सामान्य हिसावले हेर्दा पुरातन बजेट भन्दा सकारात्मक नै मान्नु पर्ने भएपनि अहिलेको बलियो सरकार अलमलमा पर्दा बजेट ‘सबै थोक भएर केही पनि नभएको’ रुपमा लिनुपर्ने बताए ।
यसअघि राजनीतिक अस्थिरता कारण आर्थिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकिएको भन्दै डा. भट्टराईले अहिलेको सरकारलाई त्यसको बाध्यता नभएको तर्क गरे ।
‘हाम्रो आवश्यकता त्यतिले पुग्दैन । दुई तिहाइको सरकार बनेको अवस्थामा हिजोको निरन्तरतासँग दाजेर हुँदैन । पञ्चायतकाल र राजतन्त्रको बजेटसँग तुलना गरेर सन्तोष लिन हुन्न’ भट्टराईले भने ।
देशको विकासलाई कछुवा गतिमा नभइ वायूपंखि घोडाको बेगमा कुदाउनु पर्ने र छलाङ मार्नुपर्ने अवस्था रहेको डा. भट्टराईको भनाइ छ ।
‘पोहोरसाल भन्दा पनि अलिकति पछाडि फर्किएर बजेट आयो’ डा. भट्टराईले भने,‘ अर्थमन्त्री नै यता जाउँ कि उता जाउँ भन्दै दोसादमा उभिन खोज्नुभयो । ’
‘झुठ, महाझुठ र तथ्यांक’ तीन थरिका झुठ हुने भन्दै डा. भट्टराईले तथ्यांक प्रस्तुत गर्दा धेरै भएको जस्तो हुने भएपनि त्यो वास्तविकता नहुने बताए । ‘आधार नै न्यून भएपछि प्रतिशत धेरै हुनुको कुनै अर्थ हुँदैन । अर्थतन्त्रको आकार नै ३० खर्ब बराबरको छ त्यस्तो कम आधार भएको अर्थतन्त्रमा ६/७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनु अनौठो होइन । इन्द्र भगवानको कृपाले पानी राम्रै आइरहेको छ कृषि उत्पादनमा बृद्धि आएको छ ।’
प्रतिपक्षी र सत्तापक्षको आँखाले नहेरि नागरिकको आँखाले हेर्ने हो भने बजेटमा सन्तुष्ट भएर बस्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो ।
वैचारिक अस्पस्टताले यस्ता खालका समस्या आएको डा. भट्टराईको भनाइ छ ।
नेपालको विकासको निमित्त भू राजनीतिका हिसावमा भारत र चीन जुन रुपमा आएका छन् त्यसबाट लाभ लिनुपर्ने भट्टराईको भनाइ थियो ।
चीनसँग होइन भारतसँग व्यापार
डा. भट्टराईले भारत र चीनसँग समदूरी वा बराबरीमा जान नसकिने बताए । ‘चिनियाँ अर्थतन्त्र एकदमै अगाडि आएपनि हिमाल पारी, यातायात लगायतका असुविधाका कारण अहिले नै हामी भारत र चीनसँग समदुरी वा बराबरीमा जान सक्दैनौं’ डा. भट्टराईले भने,‘ भारत प्रति नै हाम्रो अर्थतन्त्र आश्रित छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने गरि नीति बनाउनुपर्छ ।’
अबको तीन चार दशकसम्म भारतको विकल्पमा चीनको अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन नसकिने उनको भनाइ छ ।
‘हामीले चीनसँगको नाका खोल्ने कुरा गरेका छौ । त्यो ठिकै छ तर अहिले नै तीन चार दशक भारतको विकल्पमा चीनको अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन सक्दैनौं’ डा. भट्टराईले भने,‘जतिसुकै नाका खोलेपनि बाटोहरु बनाएपनि यति टाँढा चीनसँगको व्यापार निकै महँगो पर्छ । त्यसैले भारतबाट ल्याउनु र बेच्ने गर्नुपर्छ ।’
चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि अघि बढाउँदै गएपनि भारतसँगको आयात निर्यातको सम्बन्धलाई थप परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
कसरी दुबै देशमा निर्यात गर्न सकिन्छ भनेर चिनियाँ र भारतीयसँग गतिशिल पुलको भूमिका नेपालले खेल्नुपर्ने डा. भट्टराईको सुझाव छ ।
प्रकाशित मिति : ६ असार २०७६, शुक्रबार ११ : ५७ बजे